Maxaad ka taqaan Afrika iyo Midowga Afrika?-DHAGEYSO | Radio Muqdisho
Maxaad ka taqaan Afrika iyo Midowga Afrika?-DHAGEYSO
Published on May 28, 2013 by Admin 2 · 1 Comment · 4,635 views
Sanadkii 1963 ayaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethipia lagu aasaasay ururkii midowga Afrika oo ay urur ay ku bohoobeen dalalka ku yaalla Qaaradda Afrika oo dhan.
Magacii ugu horreeyay ee ururku waxa uu ahaa OAU ama Ururka midnimada Afrika, magacaas oo uu ururku adeegsan jiran tan iyo sanadkii 2007-dii markaas oo magaciisii la soo gaabiyay loona baddelay AU ama Midowga Afrika, si la mid ah Midowga Yurub oo loo soo gaabiyo EU. TUBTA TOOSAN 27 05 2013
Sababaha ugu weyn ee loo aasaasay ururka Midowga Afrika waxaa ka mid ahaa in uu ka taliyo aayaha Qaaradda Afrika uuna ku matelo fagaarayaasha caalamka.
Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee Midowga Afrika loo aasaasay waxaa ka mid ahaa in uu gacan ka geysto xallinta khilaafaadka iyo colaadaha ka taagan dalalka Qaaradda iyo in uu ka qeyb qaato howlaha nabad ilaalinta ee dalalka Qaaradda ama meelo ka baxsan qaaradda haddii loo baahdo.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalkii Aasaasay Midowga Afrika, dhowr jeerna waxay qabatay guddoonka Midowga Afrika, Sidoo kale Soomaaliya waxay ka qeyb qaadatay howl gallo nabad ilaalineed oo lagu xasilinayay dalal Afrika ka tirsan oo ay colaado ka jireen.
Dalalka Afrika ee ay Soomaaliya ciidammada nabad ilaalineed u dirtay waxaa ka mid ahaa Uganda, Mozambique iyo dalal kale oo dowladihii ka jiray ay ku keceen kooxo mucaarad ah oo dhibaato fara badan, waxayna ciidammadii Soomaaliya iyo saaxiibbadoodii dalalka kale ka yimid ku guuleysteen in ay xasillooni ku soo dabbaalaan dalalkii ay tageen.
Burburkii ka dib
Wixii ka dambeeyay 1991-kii markaas oo Soomaaliya ay gashay dagaal sokeeye, waxaa jiray Isku dayo badan oo la doonayay in Soomaaliya nabad loogu soo celiyo, waxaana ugu horreeyay howl galkii ( Rajo soo celinta) ee ay hormuudka ka ahaayeen Mareykanka iyo Qaramada Midoobay.
Waxa uu ahaa isku daygii ugu qiimaha badnaa ee Caalamku ku doonayay in Soomaaliya laga badbaadiyo colaado daba dheeraada, waxaana dalkeenna yimid ciidammo ka socday Qarammada Midoobay oo ka kala yimid in ka badan 30 dal,oo u badnaa dalal Islaam ah.
Tusaale ahaan dalalkii ciidammada Nabad ilaalinta noo soo diray waxaa ka mid ahaa. Turkiga, Sacuudiga, Imaaraadka, Urdun, Nigeria,Masar, Tunis , Marocco, Pakistann, Indonesia iyo kuwo kale oo fara badan.
Laakiin nasiib darrada ugu weyni waxay ahayd markii ciidammadii gurmadka noogu yimid lala dagaalay oo si gardarro ah loo dilay, taas oo markii dambe keentay in QM go’aan ku gaarto in ay ciidammadeeda kala baxdo Soomaaliya, waxaa ka sii horreeyay go’aan kaas la mid ah qaatay Mareykanka oo 1994 –kii isagana ciidammadiisa ka saaray Soomaaliya markii askar looga dilay.
Wixii ka dambeeyay 1995-kii markaas oo ay ciidammadii Caalamku ka bexeen Soomaaliya, waxaa dalku galay xaalad qasnaan ah, waxaana soo baxay hoggaamiye kooxeedyo iyo kooxo magac diineed adeegsanaya mid kastaba tuulo qabsaday, dalkiina burburiyay.
Sanadkii 2007-dii ayay ayay Ciidammo ka socda Uganda iyo Burundi yimaaddeen Soomaaliya iyagoo ka jawaabayay codsi uga yimid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistee Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo Midowga Afrika ka dalbaday ciidammo kala qeyb qaata xasilinta dalka.
Sidaas ayay dalka ku yimaadeen Ciidammada AMISOM oo gacan weyn ka geystay la dagaallanka kooxda argagixiada ah ee Alshabaab iyagoo gacan ka helaya ciidammada xoogga dalka Soomaaliyeed. TUBTA TOOSAN 27 05 2013
Afrika Gaalo miyaa?
Waxaa jira dicaayad ay fidiyaan kooxaha xag jirka ah iyo dadka leh danaha gaarka ah oo ah iyo ciidammada Midowga Afrika ay yihiin “Gaalo” ayna doonayaan in ay qabsadaan ayna gumeystaan Soomaaliya.
Laakiin kuwa sidaas leh waxay iska dhega tirayaan xaqiiqada si ay danahooda gurracan u gaaraan.
Waxaa mudan in Shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan xaqiiqooyinka soo socda:
Qaaradda Afrika ma ahan Gaalo ee waa Qaarad ay Muslimiintu Aqlabiyad ku yihiin. Waxaa tusaale kuugu filan dalkeenna Soomaaliya oo dadka ku dhaqan ay 100% Muslimiin yihiin , kana mid ah dalalkii Aasaasay Midowga Afrika.
Dalalka Masar, Tunisia, Libya, Marocco, Mali, Algeria, Sudan, Djibouti,Chad, Senigal,Niger iyo kuwo kale muslimiinta ayaa Aqlabiyad ku ah oo ka badan dadka diimaha kale heysta.
Dalka Nigeria oo ah dalka ugu dadka badan Qaaradda Afrika 50.4% dadka ku nool waa Muslimiin, sidoo kale
Sieralione oo dhawaan ciidammo nabad ilaalineed u soo idrtay Soomaaliya 62% dadka ku nooli waa Muslimiin.
Dalka Tanzania waxaa ku , waxaana tusaale kuugu filan in madaxweynaha hadda talada haya ee Jakei Kekuwati uu yahay madaxweyne muslim ah, waxaana ka horreeyay madaxweynayaal kale oo muslimiin ah, waxaana ka horreeyay oo ay ka mid ahaayeen Ali Hassan Mwinyi, Cabuud Jumbi.
Dalka Uganda ee ciidammada nabad ilaalineed u soo diray Soomaalia waxaa muslimiinta ku nool lagu qaddaray 12% shacabka Uganda, waxaa madaxweyne ka soo noqday nin Muslim ah oo la oran jiray Idi Amiin Daada, Waxaa xusid mudan in Uganda ay xubin ka tahay dalalka Islaamka.
Dalka Mali waxa uu ka mid yahay dalalka ugu xooggan qaaradda Afrika 90% waa Muslimiin.
Dalka Senigal muslimiintu waxay ka yihiin 94%.
Kenya Muslimiint waa 30% ama ka badan, waxa ayna golayaasha dowladda ku leeyihiin Kooto fiican.
Ma jiro dal Afrika ku yaalla oo aysan Muslimiintu tiro badan ku joogin, oo aysan ka qeyb qaadan siyaasadda iyo qeyb kasta oo ka mid ah nolosha.
Si kale haddii loo dhigo aqlabiyadda dadka ku nool qaaradda Afrika waa muslimiin.
Go’aannada uu qaadanayo ururka Midowga Afrika, waxaa la go’aamiyaa marka ay isu yimaaddaan dalalka ururka ku jira, waana wax la isku ogyahay, suurto galna ma ahan in AU oo ay ku badan yihiin dalal Muslim ah uu go’aan ku gaaro in muslimiinta la dhibaateeyo ama dalalkooda la gumeysto.
Sidaas darteed waa dicaayad rakhiis ah oo aan sal iyo baar lahayn in ciidammada Midowga Afrika ee Soomaaliya jooga ama meelo kale oo qaaradda ah ay gumeysi u joogaan.
Caalamka maanta la joogo wuu k asoo gudbay xilligii dalal xor ah inta lagu duulo la gumeysan jiray.
Uganda iyo Burundi, Djibouti iyo Sieralone midkoodna dalka Soomaaliya uma imaan in ay dhibaato u geystaan, balse waxay u yimaadeen in ay walaalahooda Soomaaliyeed ku saacidaan sidii ay dalkooda nabad ugu soo dabbaali lahaayeen, iyo sidii ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed u soo ceshan lahaayeen karaamadii ka luntay iyo xasilloonidii ay gacantooda ku burburiyeen.
Muddadii 50-ka sano ahayd ee uu jiray midowga Afrika waxa uu soo maray marxalado kala duwan, waxa uuna midowgu ka qeyb qaatay howl gallo nabad ilaalineed oo Afrika iyo caalamkaba ah.
Dalal badan oo Afrika ah ayuu Midowga Afrika uu ciidammo nabad ilaalineed u diray waxaa uu ka gaaray guulo la taaban karo.
Hase yeeshee Howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo yaqaan AMISOM ayaa lagu tilmaamaa kii ugu guusha badnaa ee howl gallada Midowga Midowga Afrika, ka dib markii ay AMISOM oo gacan ka heleysa Ciidanka xoogga Soomaaliyeed ay ku guuleysatay in ay dhabarka ka jebiyaan maleeshiyaadka Alshabaab, kana saartay Muqdisho iyo magaalooyin kale oo kooxdu gacanta ku heysay sida Baydhabo, Beledweyne, Marka, Kismaayo iyo degmooyin fara badan.
Ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegeynaa in ay ogaadaan in Midowga Afrika uu yahay urur ay wax ka aas aaseen, kana tirsan yihiin, una dhexeeya Qaaradda iyo Shacabkeeda oo dhan.
Maleeshiyada Alshabaab ee had iyo jeer ku cel celiya in ay Jihaad ku jiraan, aad ayay uga fog yihiin Islaamniada , waxa ayna wadaan dicaayad rakhiis ah oo ay ku doonayaan in ay beentooda run ugu ekeysiiyaan.
Kooxahan argagixisada ah ma jirto cid ay u naxayaan, waxay cadow ku yihiin nolosha iyo shucuubta oo dhan iyadoo aan loo eegin muslim iyo gaalo waxa ay yihiin.
Xitaa haddii aan u rumeyno sheegashadooda ah in ay gaalo Jihaad kula jiraan, maxay u gowracayaan oo ay u gumaadayaan dadka rayidka ah ee carruurta iyo haweenku ay ku jiraan.
Waa kooxo akhlaaqdii , Insaaniyaddii iyo xishoodkiiba ka dhammaaday oo dhiig uun u oon qaba.
Dadka ay masaajidda dhexdooda ku dilayaan, ma waxay ka tirsan yihiin AMISOM ?. Kuwa ay middida ku qalayaan ma gaalo soo duushaybaa?
Hadda waxaa Soomaaliya ku sugan ciidammo ka socda Midowga Afrika oo nabad ilaalin u yimid Soomaaliya, si ay dowladda Soomaaliyeed ugu gacan siiyaan xasilinta dalka.
Haddba dhegeystow maxaad ka taqaannaa Midowga Afrika, Sidii uu ku sameysmay , dalalka xubnaha ka ah.
Ma dhab baa in AMISOM ay yihiin ciidammo dalka ku soo duulay sida ay ku andocoodaan kooxaha qaarkood?
Waa Mowduuca Barnaamijka Tubta Toosan oo uu marti noogu yahay Sheikh C/llaahi Axmed Garuun.
TUBTA TOOSAN 27 05 2013
Abdi wali hassan ali says:	May 28, 2013 at 3:40 pm	Asc marka hore waxaan u mahad cilinayaa dhamaan shaqaalaha warbaahinta qarka soomaaliyeed gaar ahaan howsha adag ee ku jiraan intaa kadib aniga waxa aan ku suganahay wadanka uganda gaar ahaan caasimad kampala waxa aan ahay arday dhigta jaamacad kampala international university (kiu) faculty of social sciences department of public administration second year first semester waxaa diyaar u ahay in aan ku biiro ciidanka xog dalka soomaaliyeed marka aan soo dhameeto wax barashada aan ku jiro hadda sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa ii hartay three semester 2014 december waan soo gaba gabeyhaa insha allah. Intaa kadib waa naqaan sifada iyo astaamaha khawaarijta al shabaab waxa ey ka faa iideystaan dadka baahan iyo dadka jahiliinta ah oo aan diinta wax ka aqoon iyo mid maadi ah ba